Wasiirka Difaaca Itoobiya Oo Ka Hor-yimid Qorshaha Raysal Wasaare Abiy Ahmed – somalilandtoday.com
Wasiirka Difaaca Itoobiya Oo Ka Hor-yimid Qorshaha Raysal Wasaare Abiy Ahmed
(SLT-Addis Ababa)-Go’aanka ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku baabi’inayo isbahaysiga haya talada dalka Itoobiya, bilo ka hor doorashada 2020, ayaa waxa uu dhalleeceyn kala kulmay xubno sare oo ka mid ah dowladdiisa.
“In xisbigan lagu milo kuwo kale ma ahan waqtigeeda, waxaa jira halis badan. Waxaan ku jirnaa xilli kala guur ah.” Ayuu yidhi Lemma.
Lemma ayaa iminka booqasho ku jooga Mareykanka isaga oo la socda wafdi ujeedkiisu yahay inay xoojiyaan xidhiidhka dhanka gaashaandhigga ah ee ka dhaxeeya labada waddan.
Kowdii December, Abiy ayaa magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ku qabtay xaflad loogu dabaal degayo xisbiga cusub, waxaana uu sheegay “inuu diyaariyey barnaamij cad, sharci iyo qorshaha 10-ka sano ee soo socda kaasi oo Itoobiya ku hoggaamin doona badhaadhe”, sida ay werisay warbaahinta dowladda.